Manatsara ny sanda data lehibe amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny angon-drakitra lehibe an'i Pepperdata sy ny famafana automatique | Martech Zone
Alakamisy, Septambra 17, 2020 Alakamisy, Septambra 17, 2020 Ash Munshi
Rehefa araraotina tsara, ny angona lehibe dia afaka miasa mahery. Ny data lehibe ankehitriny dia mitana andraikitra lehibe amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny banky ka hatrany amin'ny governemanta. The ny vinan'ny fitomboan'ny tsena data lehibe manerantany, manomboka amin'ny $ 138.9 miliara amin'ny taona 2020 ka hatramin'ny $ 229.4 miliara amin'ny 2025, dia fanondroana mazava fa ny angon-drakitra vaventy ankehitriny dia fitaovana maharitra amin'ny tontolon'ny asa aman-draharaha.
Na izany aza, mba hiteraka ny sandam-bola indrindra amin'ny angon-drakitra lehibeo, ny tahirinao tahiry lehibe dia mila harahina sy havaozina tsy tapaka, na amin'ny rahona izany na amin'ny toerana. Eto no idiran'i Pepperdata. Pepperdata dia manome fikambanana amin'ny fanatsarana fotodrafitrasa angon-drakitra feno sy mandeha ho azy. Ny sehatra dia manome fanaraha-maso tsy manam-paharoa sy fandefasana mandeha ho azy mba hiantohana ny fotodrafitrasa lehibe sy ny fampiharana ary ny fizotranao hampandeha tsara sy mahomby, hiantohana ny fahombiazan'ny haavon'ny SLA isaky ny fampiharana ary hitazona ny vola azo tantanana.
Ny fampiasana tahirin-kevitra lehibe araka ny tokony ho izy dia mitaky fahitana sy fandefasana mitohy. Sarotra izany raha tsy misy fitaovana mety. Pepperdata dia manolotra fitaovana feno, amin'ny alalàn'ny suite misy anay sy ny vokatra rahona: Spotlight Platform, Capacity Optimizer, Query Spotlight, Streaming Spotlight ary Application Spotlight.
Pepperdata Platform Spotlight Mitondra anao amin'ny fomba fijery 360 degre amin'ireo fotodrafitrasa angon-drakitra lehibeo. Hitanareo ny zava-drehetra, ao anatin'izany ny fomba ampiasana ny loharanon-karena, ny fangatahana ara-tantara sy tena izy avy amin'ny sampahom-bolanareo, ary ny rindranasa izay mihazakazaka amin'ny ambaratonga avo indrindra sy ny apps izay mandany loharano.
Mahazo interface tsara amin'ny antsipiriany ianao izay mampiseho antsipiriany tena ilaina amin'ny clusters-nao rehetra. Ary rehefa mila mandinika tsara ianao dia afaka mandavaka sy manadihady lalindalina kokoa handinihana ireo rindranasa angon-drakitra lehibe hahafantarana ny zava-bitany eo amin'ny sehatry ny cluster. Isaky ny mipoitra ny olana amin'ny fampisehoana dia mamoaka fampandrenesana avy hatrany ny Platform Spotlight hampandre anao hampiditra valiny haingana sy haingana.
Miorina amin'ny angon-drakitra fampisehoana amin'ny fotoana tena izy, ny Spotlight Platform dia hiteraka fanitarana mety indrindra hanamarinana ireo kaontenera, filaharana ary loharanom-pahalalana hafa, hiantohana ny fandidiana milamina sy tsy misy tohiny nefa mandany ny habetsaky ny loharanom-pahalalana. Izy io koa dia mijery ny angon-drakitra fampisehoana hahitana ny firoboroboan'ny fitomboana ary haminavina tsara ny fepetra takiana amin'ny ho avy isaky ny fampiharana, ny asa ary ny fizotrany.
Ny fanatsarana an-tanana ireo antontan-kevitra lehibe dia tsy safidy azo atao intsony amin'ny tontolon'ny fifaninanana ankehitriny. Ny hafainganam-pandeha dia fototr'izany raha ny amin'ny fampiasana sy fampitomboana ny angon-drakitra lehibeo. Pepperdata Capacity Optimizer manohy ny feo ary manatsara ny loharanom-pahalalanao data be dia be miaraka amina fanovana haingana sy marina, ka miteraka 50% ny famoahana ny angona lehibe ary ny fahaizany very maina.
Pepperdata Capacity Optimizer dia manolotra autoscaling voatantana ihany koa ho an'ny asa miasa ao anaty rahona. Ny fanitsiana auto-mahazatra dia manome ny elastika ilain'ny mpanjifa amin'ny enta-mavesatra lehibe momba ny angon-drakitra. Na izany aza, tsy ampy izany. Pepperdata Capacity Optimizer dia manatsara ny autoscaling mba hahazoana antoka fa hampiasa tanteraka ny node alohan'ny hamoronana node fanampiny, hisorohana ny fako bebe kokoa ary hampihena ny vidiny fanampiny.
Ireo mpamatsy rahona dia manome fotodrafitrasa miorina amin'ny filan'ny asa lehibe indrindra. Voahaja ny fepetra takiana fatratra, fa kosa ny famoahana be loatra dia miteraka fako be loatra raha be loatra ny loharano tavela. Capacity Optimizer dia afaka mandray fanapahan-kevitra an'arivony isan-tsegondra, manao fandalinana amin'ny fotoana tena izy ny fampiasana loharanom-pahalalana hanatsarana ny fampiasana CPU, fahatsiarovana ary loharano I / O amin'ireo antokon-drakitra lehibe. Ny vokany ankapobeny dia ny fanitsiana ny scaling marindrano ary hofoanana ny fako.
Spotlight Pepperdata Query
Ny fangatahana dia singa lehibe indrindra rehefa miresaka amin'ny toe-javatra lehibe momba ny angona. Ny fangatahana dia mangataka sy mamerina angona mba hanatanterahana ny enta-mavesatra sy ny fizotrany ary ny fanamafisana ny rindranasa. Ny fangatahana tsy voamarina dia mety miteraka fihenan'ny asa sy fampiharana. Spotlight Pepperdata Query ahafahan'ny mpampiasa mandinika lalindalina kokoa ny fangatahana tsirairay ary mahazo fampahalalana marobe momba ny fanatanterahana azy sy ny fahombiazan'ny database rehetra.
Pepperdata Query Spotlight manampy anao hanamboatra, handika ary hanatsara ny enta-mavesatra fangatahana, ao anatin'izany ny Hive, Impala, ary Spark SQL. Miaraka amin'ny fangatahana manao ny asany haingana kokoa, mihena be ny vidiny, na amin'ny rahona na any an-toerana.
Ny Query Spotlight dia ahafahan'ny mpamorona mijery akaiky kokoa ny momba ny fandrindrana ny fangatahana sy ny fampahalalana momba ny fanatanterahana, mamantatra haingana ny olan'ny drafi-panontaniam-panontaniana, manombana ny fahombiazan'ny fangatahana, mamaritra ny sakan-tavoahangy ary ny olana izay manampy amin'ny fangatahana miadana, ary ny fotoana hafainganam-pandaminana. Miaraka amin'ity fitaovana ity, ny mpandraharaha dia afaka manenjana ny fangatahana manahirana saika eo noho eo, eny fa na dia ao anatin'ny tontolon'ny mpampiasa maro aza. Miaraka amin'ny fahitana ny fahombiazan'ny fangatahana dia afaka manatsara ny loharanom-bolan'ny kluster sy manatsara ny vokatra izy ireo.
Spotlight streaming Pepperdata manome ny asan'ny IT sy ny ekipa mpamorona tabilao natambatra sy feno tsipiriany hijerena ny metrika cluster Kafka misy fahitana amin'ny fotoana tena izy. Ny vahaolana dia ahafahan'izy ireo manamboatra fahasalamana, lohahevitra ary fizarazaran-tarehy.
Fitaovana tena tsara izy io satria goavana sy tsy mora idirana ny angon-drakitra telemetera novokarin'i Kafka, indrindra fa ireo sampahom-pamokarana marobe. Ny ankamaroan'ny vahaolana fanaraha-maso ny fampisehoana Kafka dia tsy mahavita manome ny metrika, fahitana ary ny fahitana takiana mba hampandehanana ny rindranasa mivantana mankany amin'ny ambaratonga avo indrindra.
Ny fanaraha-maso ny fampisehoana Kafka mahery an'ny Spotlight dia mamela ny mpampiasa handrindra ny metrika fampisehoana Kafka ary hanao fampandrenesana momba ny fitondran-tena sy ny hetsika Kafka tsy mampino. Ireo fanairana ireo dia manamora ny fahafahan'ny mpampiasa manara-maso sy mahita ny fiovaovan'ny fotodrafitrasa IT tsy ampoizina.
Spotlight Application Pepperdata
Spotlight Application Pepperdata mamoaka sary feno sy feno amin'ny antsipiriany momba ny fampiharana anao amin'ny toerana tokana sy miray. Amin'ity vahaolana ity dia manombatombana ny fahombiazan'ny rindranasa tsirairay ianao ary mamantatra ny olana 90% haingana kokoa, vokatr'izany dia voavaha haingana kokoa ary mahomby kokoa amin'ny ankapobeny.
Pepperdata koa dia manome tolo-kevitra manokana momba ny asa isaky ny fampiharana ary mamela anao hanangana fampandrenesana izay ampandehanan'ny fihetsika manokana sy ny valiny manokana, izay tena misoroka ny mety tsy fahombiazan'ny tsy fahombiazana. Pepperdata Application Spotlight dia manampy anao hahatratra ny fahombiazan'ny fampiharana amin'ny rafitra rafitra mpanofana marobe, na aiza na aiza no itondranao ny enta-mavesatrao (izany hoe eo an-toerana, AWS, Azure, na Google Cloud).
Ny vahaolana goavana momba ny automatisation Pepperdata dia nanampy ireo fikambanana lehibe manerana ny indostria marobe, ao anatin'izany ny orinasa Fortune 500, hanatsara sy hanatsara ny fahombiazan'ny tahirin'ny angon-drakitra lehibe ananany. Miaraka amin'ny Pepperdata, ireo orinasa lehibe sy kely dia mankafy mitahiry vola be amin'ny fandaniana fotodrafitrasa tahiry lehibe, mampihena ny MTTR (Fotoana tokony hamerenana amin'ny laoniny), ary fanatsarana ny fahombiazana sy ny fampitaovana.
Pepperdata dia nanampy orinasa teknolojia Fortune 100 mitahiry $ 3.6 tapitrisan amin'ny tahiry finday ary manome ny fahitana manjavozavo ho lasa zava-misongadina ao amin'ny cluster, ny fironana miasa ary ny tsy fahaiza-miasa.
Orinasa mpaninjara Fortune 100 no nanatsara ny fahombiazan'ny maritrano data miaraka amin'i Pepperdata. A Fampitomboana 30% amin'ny famoahana nahafahan'ny orinasa nihazakazaka fampiharana sy enta-mavesatra bebe kokoa, nanapaka ny MTTR tamin'ny 92%, ary nahazo tahiry 10 tapitrisa $ amin'ny fandaniana fotodrafitrasa.
Orinasa mpitsabo iraisam-pirenena miantoka ny fahazoana 24/7 amin'ireo fampiharana mamonjy aina amin'ny alàlan'ny vahaolana momba ny fahaizan'i Pepperdata sy ny vahaolana fanatsarana. Ny fampiharana an-tsokosoko dia mankafy ny fotoanan'ny fotodrafitrasa ary ny fanairana amin'ny fotoana tena izy dia avoaka rehefa tratra ny tokonam-baravarana mba hisorohana ny tsy fahombiazana.
Ampitomboy izao ny sandan'ny data lehibeo
Data lehibe no ho avy ary miroso mankany aminy ny indostria rehetra. Fa io fitomboana io dia miaraka amin'ny sarany lafo. Mila manokatra ny angovo sy ny lanjan'ireo angon-drakitra lehibeo ianao raha te ho tafavoaka velona sy hatanjaka hatrany ny fikambanananao, indrindra amin'izao fotoan-tsarotra izao.
Arakaraka ny fisian'ny fampiharana data be dia be mifindra monina mankany amin'ny rahona no mampitombo ny mety hisian'ny tsy fitoviana amin'ny loharano. Tamin'ny taona 2019 fotsiny, ny fatiantoka ateraky ny fako rahona dia manodidina ny $ 14 miliara. Rehefa manomboka tafarina amin'ny areti-mandringana ny toekarena erak'izao tontolo izao dia mila manatsara ny lalao data lehibe ho azy ireo ny fikambanana satria mikorontana ny rehetra hametraka ny toerany amin'ny indostrian'izy ireo avy.
Tsy maintsy tadidin'ny orinasa fa hitombo ny vidiny raha tsy manatsara tsara izy ireo. Ny orinasa dia tokony hiezaka ny handray vahaolana amin'ny alàlan'ny milina-mianatra izay afaka mamantatra haingana izay sampahony mandany toerana na loharanon-karena, eo am-piatrehana ny filàna ilaina amin'ny fanovana.
Mifandraisa amin'i Pepperdata hahitana ny fomba ahafahan'ny vahaolana amin'ny fanatsarana angon-drakitra goavana manandratra ny orinasanao amin'ny sehatra vaovao.
Misorata anarana amin'ny fitsapana Pepperdata maimaim-poana
Tags: fandefasana mandeha ho azyawslehibeangona lehibe fanovana mandeha ho azyautomatisation data befanatsarana data lehibestack data lehibefanatsarana ny antontan-kevitra lehibefotodrafitrasa datagoogle cloudKafkamidika hoe fotoana fanamboaranamttrpepperdataSpotlight Application PepperdataPepperdata Capacity OptimizerPepperdata Platform SpotlightSpotlight Pepperdata QuerySpotlight streaming Pepperdata
Talohan'ny nidirany tao Pepperdata, Ash dia filohan'ny mpanatanteraka ao amin'ny Marianas Labs, fanombohana fianarana lalina izay amidy tamin'ny Desambra 2015. Talohan'izay dia izy no CEO ho an'ny Graphite Systems, fanombohana fitehirizana tahiry lehibe izay namidy tamin'ny EMC DSSD tamin'ny Aogositra 2015. Nanompo koa i Ash amin'ny maha CTO an'i Yahoo azy, amin'ny maha CEO an'ny orinasam-panjakana sy ny tsy miankina azy, ary ao amin'ny birao fanombohana teknolojia marobe. Ash dia niditra tao amin'ny Oniversite Harvard, Brown University ary Stanford University.